Umaki: Jumpseller | Martech Zone
I-Poptin: Ama-Popups ama-Smart, Amafomu Ashumekiwe, nama-Autoresponders
Uma ufuna ukukhiqiza ukuhola okuningi, ukuthengisa, noma okubhaliselwe okuvela kubavakashi abangena kusayithi lakho, akukho kungabaza ngokusebenza kwezigelekeqe. Akulula njengokuphazamisa ngokuzenzakalela izivakashi zakho, noma kunjalo. Ama-popups kufanele anikezwe isikhathi ngokukhaliphile ngokususelwa ekuziphatheni kwezivakashi ukunikela ngokungabi namthungo umuzwa ngangokunokwenzeka. I-Poptin: Ipulatifomu yakho yokuzivelela I-Poptin iyipulatifomu elula futhi engabizi kakhulu yokuhlanganisa amasu wokukhiqiza ahola kanjena kusayithi lakho. Ipulatifomu inikeza: